Google waxay Apple siisay $ 1000 bilyan si mashiinkeeda raadinta loogu sii daayo iPhone | Wararka IPhone
Google waxay Apple siisay $ 1000 bilyan si ay mashiinkeeda raadinta ugu sii hayso iphone
Shirkadaha tiknoolajiyada ikhtiyaar uma laha in ay is fahmaan maadaama ay had iyo jeer leeyihiin sabab la gaaro nooc ka mid ah heshiis waxtar u leh labada dhinac, sida xaqiiqda ah in Google uu sii ahaanayo mashiinka raadinta asalka ah ee dhammaan noocyada iOS. IOS waxay noo ogolaaneysaa inaan u bedelno mashiinka raadinta asalka ah Yahoo, Bing ama Tor, laakiin boqolkiiba dadka sameeya waxay ku dhow yihiin haraaga.
Intii lagu jiray 2014, heshiiska u dhexeeya Google iyo Apple ee wiilasha Cupertino si loo dhiso Google oo ah mashiinka raadinta asalka ah khasnadaha Google ku kiciyey $ 1.000 bilyan, sida uu ku waramay Bloomberg. Laakiin intaa waxaa sii dheer, heshiiska waxaa ku jiray qayb ka mid ah faa'iidooyinka ay Google ka heshay booqashooyinka ay tilmaamayso iPhones.
Heshiiskan waxaa si rasmi ah loogu shaaciyay loolanka sharciyeed ee socday tan iyo 2010 ilaa ku xadgudubka xuquuqda lahaanshaha ee u dhexeeya Oracle iyo ragga ka socda Mountain View. Shirkadda Oracle ayaa ka dacweysay shirkadda Google adeegsiga software-ka Java si loo horumariyo nidaamka hawlgalka ee taleefannada iyo kiniiniyada Android.
Intii lagu guda jiray dagaalka sharciga, waxaa la sheegay in qaybinta faa'iidooyinka laga helo qaybta xayeysiinta ee ka imaaneysa aaladaha Apple gaadhay 34% tan dambe. Dhinacyada ku lugta leh heshiiska, Google iyo Apple, waxay la xiriireen garsooraha kiiska gacanta ku haya si looga hortago in macluumaadkaas la shaaciyo maaddaama shuruudaha heshiiska labada shirkadood ay ahaayeen kuwo sir ah.
Wax yar ka dib markii macluumaadkan la shaaciyey, dokumentiyada in sheegay heshiiskan waa la waayeySidaa darteed, waxay u muuqataa in garsooraha ugu dambeyn aqbalay codsigii ay soo bandhigeen labada shirkadood, kana tirtiray soo koobista dukumiintiyada muujinaya tirooyinka la xiriira heshiiska labada shirkadood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Google waxay Apple siisay $ 1000 bilyan si ay mashiinkeeda raadinta ugu sii hayso iphone
Kani waa xayeysiiska cusub ee Samsung ee tixraacaya Apple markale
Marka loo eego kireysigii ugu dambeeyay, Apple wuxuu dhab ka yahay Xaqiiqada Virtual